February 13, 2020 - Myitter
တင်ပြပေးလိုက်ပါသည် သားသမီးကိုချစ်သောမိဘများ အလိုမလိုက်သင့်သော ကိစ္စရပ်များအား အလိုမလိုက်မိကြစေရန် အဖြစ်မှန်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်… ကျွန်တော်မှာသားသုံးယောက်ရှိပါတယ် ယောင်္ကျားတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျား သားယောင်္ကျားလေးမွေးရင်ပျော် ကျတာပေါ့ ပထမမွေးတော့လဲသား ဒုတိယမွေးတော့လဲ သား တတိယမွေးတော့လဲသားဘဲဗျား သားသုံးယောက် ကိုချစ်တဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေက သူတို့တွေပူစာသမျှအကုန် ဝယ်ပေးခဲ့တယ်လေး သူတိုရဲ့ကုသိုလ်ကံလို့ဘဲပြောရ မလားပေါ့ အဲ့ဒီအချိန်ကစီးပွားရေးကလဲကောင်းတယ် မန္တလေး […]
ရေဦးမြို့နယ် ညောင်နီကန်အုပ်စုအင်ပင်ရေ ရွာ၏ အနောက် ယာတောအတွင်းဦးတင်လှ + ဒေါ်တင်ဝင်း တို့၏သမီး မနီလာအေး အသက် ( ၂၇ )နှစ်အား11.2.2020 2.30 PM သတ်ပြီးမီးနှင့်ရှို့ထား သည်ဟုသိရပါသည်။ ‌ရေဦးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အမှူဖွင့်လှစ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီးအလောင်းအား ရေဦးဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင် စစ်ဆေးလျှက်ရှိပါသည်။ […]
မြင်းခြံမှာ မီးလောင်နေ ၁၃.၂.၂၀၂၀ ညနေ:၅ နာရီ ၄၀ မိနစ်ခန့် မြင်းခြံမြို့ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက် မီးလောင်မှု့မြင်ကွင်း ၁၃.၂.၂၀၂၀ရက်နေ့၊ (၁၇:၄၅)အချိန်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံမြို့၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် မြင်းခြံခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံးနှင့် မြင်းခြံမြို့နယ် မီးသတ်စခန်းတို့မှ မီးသတ်ယာဉ်(၁၂)စီး ထွက်ခွာလျက်ရှိပါသည်။ Video- […]
ပုဂံဘုရားမှာ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲ တည်းခိုခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ကို စုံစမ်းနေ …
ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲတည်းခိုခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ကို လိုက်လံစုံစမ်းပြီး ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ ပုဂံဘုရားအမှတ်(၁၅၅၄)မှာ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲတည်းခိုခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ကို လိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်လို့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပုဂံဌာနခွဲမှ သိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုဂံယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေ ပရဝုဏ်အတွင်းမှာ ညစ်ညစ်း video ရိုက်သွားတဲ့ စုံတွဲဟာ မည်သူမည်ဝါဆိုတာသိရမှ အရေးယူဆောင်ရွက်လို့ရမှာဖြစ်လို့ […]
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်း လင်းနို့များတွင်တွေ့ရှိထား ….
တကမ္ဘာလုံး တခြားဘယ်နေရာမှာမှ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့တွေဆီမှာ တွေ့ထားတယ်လို့ စမစ်ဆိုးနီးယန်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဇီဝဗေဒဌာန ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကု ဆရာဝန် မာ့ခ်ဗာလစ်တီတိုကို ကိုးကားပြီး ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်မှာ ရေးပါတယ်။ ဗာလစ်တီတိုဟာ […]
နတ်ကိုင် ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ သစ်ပင်ကြီးအောက်က နတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ် တက်နင်းဖြတ်တဲ့ လူရဲ့အဖြစ် ….
နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်ကနတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ် လူကောင်းကို အနိုင်ကျင့်ရတာ လွယ်တယ် ပုံပြင်ကလေးက ဒီလိုဗျ။ တခါက ရွာတရွာမှာ ရွာဦးနတ်ကွန်းဘေးမှာ ရေနှုတ်မြောင်း ဖြတ်စီးနေတယ်။ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်က မတ်တတ်ကိုယ်တော်ကြီး။ တနေ့တော့ လူတယောက်က မြောင်းဘောင်အတိုင်း လျှောက်လာပြီး ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးမယ်လုပ်တယ်။ အဲ့မြောင်းထဲမှာ ရေတော်တော်များနေတယ်။ ညက မိုးရွာထားတာကိုး။ […]
ယူသွားလို့မရတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ယူသွားလို့ရတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်နှင့်လည်း လဲသွားလိုက်ပါ ….